Filecoin: Isha Furan Nidaamka Keydinta Baahinta | Laga soo bilaabo Linux
El Il furan sii kordheysa isku xirnaanta ama labada dhinacba faa'iido u leh, oo leh teknoolojiyadaha walaasheed ee Xannibaadda iyo Dhaqaale baahsan (DeFi).
Taasina waa sababta maanta, waxaan u baari doonnaa dalab la xiriira Isha Furan, Xannibaadda iyo DeFi, laga bilaabo berrinka Nidaamyada keydintawacid "Filecoin".
Si kastaba ha noqotee, munaasabado kale ayaan sidoo kale wax ka daabacnay fur barnaamijyada farriinta baahinta, ka amni iyo waxtar badan, silsilad dhismeyaal ah iyo fursado lacag abuur ama adeegsi dhaqaale, sida "Adamant, Juggernaut, Sphinx iyo Status".
Sidoo kale, intaadan faallo ka bixin "Filecoin"Waxaa muhiim ah in la ogaado in arjiga ama tiknoolajiyada furan ee furan ay xiriir dhow la leedahay codsi kale oo horey si aad ah dib loogu eegay Blog-ka, loona yaqaan «IPFS». Iyo taas, waqtigeeda awgeed aan ku muujino waxyaabaha soo socda:
"... IPFS waxay buuxin kartaa ama beddeli kartaa Protocol Transfer Protocol-ka hadda jira (HTTP), oo ah midka hadda fuliya gudbinta macluumaadka ee daruuraha (webka) heer caalami ah. Sidaa darteed, IPFS waxay higsaneysaa inay u beddesho howlaha hadda jira ee internetka oo ku saleysan server-yada dhexe ee shabakad si buuxda loo qaybiyey iyada oo loo marayo P2P Technology iyo Blockchain. Si markaa loo noqdo nidaam faylal la qaybiyey, oo leh hageyaal iyo feylal, oo isku xiri kara dhammaan aaladaha kombiyuutarka iyo waxyaabaha dijitaalka ah, adduunka oo dhan, isla nidaamka faylka." IPFS: Sidee loo adeegsadaa Nidaamka Faylka ee Interplanetary ee GNU / Linux?
Nooca cusub ee IPFS 0.8.0 horey ayaa loo sii daayay wuxuuna u yimid inuu fududeeyo shaqada biinanka
Iyo kuwa daneynaya inay ku dhex milmaan codsiyada "Adamant, Juggernaut, Sphinx iyo Status", horey loo soo sheegay, waxaad riixi kartaa galitaankeena soo socda ee la xiriira mowduucaas:
1 Filecoin: Nidaamka kaydinta baahinta ee ku saleysan Blockchain
1.1 Waa maxay Filecoin?
1.2 Iyo maxaa kale oo ah Filecoin?
1.3 Maxaa loo hirgeliyaa loona adeegsadaa Filecoin?
Filecoin: Nidaamka kaydinta baahinta ee ku saleysan Blockchain
Waa maxay Filecoin?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah oo ka mid ah "Aasaaska Filecoin", waa kuma urur madax banaan heegan u ah taageerida "Filecoin", tan tiknoolajiyad furan ama codsi Waxaa lagu tilmaamay:
“Shabakad fac-ilaa-fac ah oo kaydiya faylasha, oo leh dhiirigelin maaliyadeed oo lagu hubiyo in faylasha lagu kaydiyo si kalsooni leh muddo kadib. Hadafka Filecoin waa inuu abuuro saldhig baahsan, hufan oo adag oo loogu talagalay macluumaadka aadanaha. " Waa maxay Filecoin?
Intaa waxaa dheer, in si faahfaahsan oo cad oo shuruudo ah, iyo tixgelinta xiriirka "Filecoin" con "IPFS" waxyaabaha soo socda ayaa lagu dari karaa:
""Filecoin" con "IPFS" waa laba hab-maamuus oo kala duwan oo is kaabaya, labadaba waxaa abuuray Protocol Labs. IPFS waxay u saamaxdaa asxaabta inay kaydin karaan, codsan karaan oo isku wareejin karaan xog la hubin karo midba midka kale, halka Filecoin loogu talagalay inay bixiso nidaam kaydinta xogta joogtada ah. Qaab dhismeedka dhiirrigelinta ee Filecoin, macaamiisha ayaa lacag ku bixiya in lagu kaydiyo xogta heerar cayiman oo loo aaneynayo iyo helitaankooda, macdan qodayaashana waxaa la siiyaa lacag oo waxaa lagu abaal mariyaa inay si joogto ah u keydiyaan xogta oo ay si qarsoodi ah u muujiyaan. ”
Marka la soo koobo, waxaa la dhihi karaa sidaas:
“IPFS ayaa hagta isla markaana dhaqaajisa waxa ku jira, halka Filecoin uu yahay lakab dhiirigelin u leh joogteynta xogta. Waxyaabahani waa kala-go'i karaan - waad isticmaali kartaa mid kale la'aantiis, IPFS-na waxay hore u taageertay is-abaabulid ama qaabab badan oo ku adkaysi xog iyada oo loo marayo aaladaha sida IPFS Cluster. Iswaafajinta udhaxeysa IPFS iyo Filecoin ayaa loogu talagalay inay ahaato mid aan xasilooneyn sida ugu macquulsan, waxaana lafilayaa inay isbadasho waqti kadib. " Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya IPFS iyo Filecoin?
Iyo maxaa kale oo ah Filecoin?
Marka la eego, "Filecoin" ahaanshaha a Mashruuca Isha Furan, sidoo kale waa a Mashruuca Blockchain iyo DeFi, wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
“Waa borotokol iyo calaamado, oo xannibaadiisa ay ku hoos shaqeyso tijaabo ugub ah, oo lagu magacaabo Proof-of-Spacetime ama PoST), halkaasoo baloogyada ay abuureen macdan qodayaal keydinaya xogta. Hab-maamuleedka Filecoin wuxuu bixiyaa keydinta xogta iyo adeegga dib-u-soo-celinta iyada oo loo marayo shabakad bixiyeyaal kaydiya madaxbannaan oo aan ku xirnayn hal isku-duwaha, halkaas oo: Macaamiisha ay lacag ku bixiyaan kaydinta iyo soo-celinta xogta. Macdan qodayaasha waxay kasbadaan astaamo iyagoo siinaya keyd, taasi waa, macdan qodayaasha waxay kasbadaan astaamo iyagoo keenaya xogta. " Waa maxay Filecoin?
Maxaa loo hirgeliyaa loona adeegsadaa Filecoin?
"Filecoin" sida xal furan, ayaa naga caawin kara inaanaan ku tiirsaneyn lahaanshaha, xiritaanka iyo xalka ganacsiga sida DropBox y Mega Nidaamyadeena hawlgalka ee bilaashka ah iyo kuwa furan, sida, GNU / Linux Distros.
Taasi waa in la yiraahdo, jiritaankaas "Filecoin" una shabakad kaydinta baahinta ku saleysan a Silsiladda Xannibaadda, waa la iibsan karaa ama lagu bixin karaa kiro, meel diskiga lagu kaydiyo (daruur).
Iyo sidaas awgeed, dadka aamin kaydinta of isaga xogta shakhsiga ah, iyo xog kale oo muhiim ah oo la xiriirta shirkad kasta. Macluumaadku wuxuu si fudud ugu noolaan lahaa webka, oo loo qaybiyey loona kaydiyay meelo kala duwan kombiyuutarada adduunka oo dhan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "Filecoin" waad booqan kartaa degel rasmi ahuu bogga GitHub ama kan xiga xiriir aan rasmi ahayn ku saabsan.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Filecoin», taas oo ah Nidaamka kaydinta ee baahsan oo ku saleysan Blockchain iyo Furan Furan, isla mar ahaantaana, waa tusaale aad u fiican oo ku saabsan midowga ka dhexeeya falsafadda Software bilaash ah iyo ilo furan oo lagu daray Tikniyoolajiyadda Blockchain iyo Isbedelka tiknoolajiyada DeFi, oo aan horay uga soo hadalnay; noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Filecoin: Nidaamka Kaydinta ee Baahinta Aaladda Furan
Google waxay soo saartay koodhka isha ee loogu talagalay Lyra, oo ah koodh cod ah oo Android ah